Kylian Mbappe oo raali-gelin ka bixiyey rigooradii uu xalay ka khasaariyey xulkiisa Faransiiska – Gool FM
(Paris) 29 Juun 2021. Weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe ayaa raali-gelin ka bixiyay rigooradii uu ka khasaariyey xalay xulkiisa kulankii Switzerland, iyagoo arkay inay ku hareen wareegga 16-ka ee tartanka Euro 2020.
Mbappe, kaasoo ku guuldarreystay inuu gool dhaliyo intii uu socday tartankan ayaa kulankii xalay oo 120 daqiiqo kaddib gool ku laadyo gaaray, waxa uu u soo istaagay inuu qaato rigooradii shanaad ee xulkiisa, waxaana kubbaddii uu tuuray ka badbaadiyey Goolhaye Yann Sommer.
Iyadoo ciyaartoyda Switzerland ay si waalli ah ugu dabaal dageen hareerahiisa, Mbappe wuxuu u muuqday qof go’doon ah markii uu garoonka ka baxayay, kaddibna waxa uu soo beegsaday baraha xiriirka bulshada si uu taageerayaasha ugu muujiyo murugadiisa.
“Aad ayay u adag tahay in boggaan la laabo, murugadu waa mid badan kaddib markii nala reebay, ma’aanan gaari karin hadafkeenna” ayuu soo qoray Mbappe.
“Waan ka xumahay rigooradaan, waxaan doonayay inaan caawiyo xulka, laakiin waan ku guuldarreystay.
“Helitaanka hurdada way adkaan doontaa. laakiin nasiib-darro waa kor u kaca iyo dib u dhaca ciyaartan aan aad u jeclahay.
“Waan ogahay taageerayaashiinna inaad niyad jabsantihiin, laakiin waxaan wali rabaa inaan idiinkaga mahad-celiyo taageeradiinna iyo sida aad mar walba noo aaminsan tihiin.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa noqon doona in aan ahaanno kuwo adag xitaa waqtiyada soo socda. Hambalyo iyo nasiib wacan ayaan leeyahay Switzerland.”
Mason Greenwood oo helay dalab ku aaddan inuu xulka qaranka England ka wareegsado...(Xulkee ayaa soo dalbaday laacibka Man United?)